ZTE သည် စက်မှုလုပ်ငန်း ၏ပထမဆုံး laptop အခြေခံ cloud PC ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည် - Pandaily
ZTE သည် စက်မှုလုပ်ငန်း ၏ပထမဆုံး laptop အခြေခံ cloud PC ကိုမိတ်ဆက် ခဲ့သည်
Jun 22, 2022, 18:35ညနေ 2022/06/22 23:37:36 Pandaily
China Telecommunication Equipment Provider ZTE ကစက်မှုလုပ်ငန်း ၏ပထမဆုံး လက် တော့ ပ် အခြေပြု cloud computing ကွန်ပျူတာ W600D၎င်း၏ နှစ်ပတ်လည် Cloud Network Ecological Summit 2022 တွင် ။ ဤ ထုတ်ကုန် သည်အလွန် မြင့်မားသော သယ်ဆောင် ရလွယ်ကူ ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မား ခြင်း၊ လုံခြုံစိတ်ချရ မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရ မှုနှင့် ကာဗွန် နိမ့် ခြေရာ များရှိသည်။
Cloud ရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် အရွယ်အစား နှင့် ဝယ်လိုအား ခွဲဝေ ချထားပေး ခြင်းသည် CPU, GPU, memory နှင့် disk သတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ချိန်ညှိ နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် R & D ပရိုဂရမ်း မင်း၊ ဗွီဒီယို ပြန်ဖွင့် ခြင်း၊ 3D ဂရပ်ဖစ် ပြန်ဆို ခြင်းနှင့် အွန်လိုင်း ဂိမ်း များကဲ့သို့သော application များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် 64 core CPU နှင့် 256GB memory အထိ ထောက်ပံ့ နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ ကွန်ပျူတာ များထက် သီအိုရီအရ စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက် ဖြစ်သည်။
၀ န်ထမ်း အမျိုးမျိုး သည်သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် စားပွဲ ခုံ များသို့ ၀ င်ရောက် နိုင်ရန်အတွက် ကုဒ်နံပါတ် များကို စကင်ဖတ် စစ်ဆေးရန် ကော်ပိုရိတ် အများ သုံး terminal တစ်ခု အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းသည် မိသားစု ၏အများ ပြည်သူ ဆိုင်ရာ terminal တစ်ခုအဖြစ် လည်း အသုံးပြုနိုင် ပြီး အွန်လိုင်း သင်ယူမှု နှင့် ဖျော်ဖြေရေး အတွက် မိသားစု ၀ င်များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။
W600D မွာ Matte Silver Case ကို အသံုးျပဳ ထားပါတယ္။ ၁၃. ၉ မီလီမီတာ အထူ ရှိပြီး အသားတင် အလေးချိန် ၁. ၂၅ ကီလိုဂရမ် ရှိပြီး ၁၄ လက်မ မျက်နှာပြင် နှင့် full-size keyboard နှင့် HD ကင်မရာ တို့ ပါရှိသည်။ W600D သည် Super 8 နာရီ ဘက်ထရီ သက်တမ်း ရှိပြီး တစ်နေကုန် standby အလိုအလျောက် hibernation နည်းပညာဖြင့် ဖြည့်စွက် ထားသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ZTE အပေါ် ဆိုင်းငံ့ ပြစ်ဒဏ် အမေရိကန် ရုပ်သိမ်း
W600D ကိုယ်တိုင် တွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ထားသော Android 11 စနစ် တပ်ဆင် ထားပြီး ZTE ၏ uSmart cloud PC solution ကိုအသုံးပြု ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့အပြင် မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ZTE သည် Cloud PC ထုတ်ကုန် ဖြစ်သော W100D ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အရွယ်အစား သေးငယ် ပြီး ရိုးရှင်းသော ဆက်သွယ် မှုအတွက် built-in Bluetooth နှင့် WiFi module များပါ ၀ င်သည်။ W100D သည် HDMI output ကိုထောက်ပံ့ ပေးပြီး type-C connectors ဖြင့် လည်ပတ် သည်။ ZTE Cloud PC W100D သည် bandwidth 100Kbps မှ 20Mbps အထိ desktop bit rate ကို အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။